बुधबार कालिका मन्दिरको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज - satkar post
बुधबार कालिका मन्दिरको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज
आज वि.सं. २०७६ साल मंसिर १८ गते बुधबारको राशिफल । इ.स. २०१९ डिसेम्बर ४, ने.सं. ११४० थिंलाथ्व, मार्ग शुक्लपक्ष। अष्टमी, २५:१८ उप्रान्त नवमी ।
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) आम्दानी मनग्य भए पनि आक’स्मिक ख’र्चले धन संग्रहमा बा’धा पुग्नेछ। आफ्नो मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। चिताएका काममा अलि बा’धा हुनसक्छ। तापनि प्रयत्न गर्दा ऋणमोचन हुने समय छ। पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ। साझेदारीमा पनि फाइदै हुनेछ। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। आर्थिक लेनदेनमा सजग रहनुहोला। बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) पुरुषार्थी काम प्रारम्भ हुनेछ। प्रयत्न गर्दा वि’शेष स्थान प्राप्त हुन सक्छ। विभिन्न अव’सरले पछ्याउनेछन् भने भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने अव’सर जुट्नेछ। मेहनतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। कामको सन्दर्भमा वि’शिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। नोकरी तथा व्यापार–व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई फाइदा होला। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने अव’सर प्राप्त हुनेछ। मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) शुभचिन्तकहरूले साथ दिनाले पहिलेको चु’नौती समाप्त होला। अरूको काममा जुट्नुपरे पनि फाइदा आफैंलाई हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। भाग्यले विभिन्न अव’सर थमाउनेछ। काम देखाएर अरूको सहयोग जुटाउन सफल भइनेछ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मेहनतले पदीय जिम्मेवारी समेत दिलाउनेछ। धेरैले आफ्ना कामको तारिफ गर्नेछन्। कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) समयमै ग’म्भीर नबन्दा नचिताएको सम’स्या देखिन सक्छ। आफ्नै कम’जोरीले इष्टमित्र टाढिन सक्छन्। हु’लमुलमा धनमाल गुम्न सक्छ। ख’र्च बढ्नुका साथै अर्थ अभा’व महसुस हुनेछ। अव’सरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ला। आ’क्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्। फाइदाका पछि लाग्दा आत्मीय सम्बन्ध बि’ग्रन सक्छ। उपचारमा खर्च हुने समय छ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ। आफन्तसँग रमाइलो भेटघा’ट हुनेछ। आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। अ’प्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यवसायबाट प्रशस्त आम्दानी भइरहनेछ। भौतिक वस्तुहरू जुटा’उन सकिनेछ। कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) हिम्मतले काम लिँदा मनग्य लाभ हुनेछ। मेहनतले प्रति’स्पर्धाको दौ’डमा सफलता दिलाउनेछ। भौतिक साधन जु’ट्नेछन्। ब’लजफ्ती गरेरै भए पनि चिताएको काम बनाउन सकिनेछ। श’त्रु परा’स्त हुनेछन् भने रोगबाट पनि छुटकारा मिल्नेछ। आ’वेशलाई निय’न्त्रणमा राख्नुहोला, मु’द्दा–मा’मिलामा विजयी भइनेछ। व्यवसायमा मनग्य फाइदा हुनेछ। श’त्रु तथा प्रति’स्पर्धीसँग भने स’म्झौता गर्नुपर्ला । तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) कामले उत्साह जगाउनेछ। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। अव’रोध बिस्तारै समाप्त हुनेछ। अध्ययनमा राम्रो प्रगति हुनेछ। हिम्मत गर्दा आफ्नै प्रतिभाले फाइदा दिलाउनेछ। बौद्धिक प्रति’स्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। तर महत्वा’कांक्षा भने पूरा नहुन सक्छ। साइनो गाँ’स्नेहरूले व्यवहारमा अ’प्ठ्यारो पार्न सक्छन्, सतर्क रहनुहोला। बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) समयमा वचन पुर्याउन नसक्ता अरूले आलो’चना गर्न सक्छन्। बेसु’रमा बोल्ने बानीले वा’दविवाद नि’म्त्याउन सक्छ। परि’स्थितिको बन्ध’नले पनि स्वतन्त्रतामा बा’धा पुर्याउला। महत्त्वाकांक्षी योजना गो’प्य राखेर अघि बढ्नुपर्ला। आवेशको निर्ण’यले स’मस्या नि’म्त्याउने हुँदा व्यवहारमा स’जग रहनुपर्ला। ई’र्ष्या गर्नेहरूले काममा अव’रोध पुर्याउन सक्छन्। बुद्धिको उपयोग गर्दा काम काम सम्पादन हुनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ। मेहनत गर्दा विभिन्न अव’सर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ भने आम्दानी बढ्नेछ। उद्यो’ग र व्यापारमा वि’शेष फाइदा हुनेछ। श’त्रुहरू परास्त हुनेछन् र प्रति’स्पर्धीलाई पछि पार्न सकिनेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। सहयोगीहरू जुट्नेछन् भने पहिले दु’श्मनी गर्नेहरू पनि मित्र बन्नेछन् । मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) द्विविधा बढ्नाले नि’र्णायक क्ष’मता कम’जोर बन्नेछ। वा’दविवादले आँटेका काममा बा’धा पुर्याउने हुँदा सज’ग रहनुपर्ला। अरूको वचन टाल्न नसक्दा दु:ख पाइनेछ। तर मिहिनेत गर्दा आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन्। पहिलेका कम’जोरी सुधार्ने अ’वसर प्राप्त हुनेछ। बोलीको भरमा काम सम्पादन हुनेछ। पठन–पाठनमा राम्रै प्रगति हुनेछ। वि’शेष स’भा–समारोहमा सहभागी बन्ने अ’वसर जु’ट्नेछ। कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) पहिलेको सफलताले महत्त्वा’कांक्षा बढाउनेछ। विभिन्न अव’सर पनि आउनेछन्। तर ह’ठात् नि’र्णय गर्दा सम’स्या देखिन सक्छ। खानपान र भेटघा’टको अल’मलले चिताएका काममा बा’धा पुग्न सक्छ। तापनि मिहिनेत गर्दा दिगो काममा जग बसाउने अ’वसर जु’ट्नेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम, दाम र इनाम हातपार्ने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) आक’स्मिक ख’र्चले अर्थ अभा’व देखापर्न सक्छ। बेलैमा हो’स नपुग्नाले केही चु’नौती झे’ल्नुपर्ला। समय दिन नसक्दा काम बिग्र’न सक्छ। लगानी बढाउनुपर्ने बा’ध्यात्मक परि’स्थिति आउन सक्छ। आ’क्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्। शुभचिन्तकहरू समेत टाढा हुनेछन्। धेरै लगानीपछि कममात्र फाइदा हुनेछ। रो’किएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला। नेपाली पात्रोबाट